အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ Hair Shear Sharpening Australia - Japan Scissors
အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ Hair Shear Sharpening Australia
ဇွန်အိုး မတ်လ 11, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 5
ဆံပင်ကတ်ကြေးတစ်စုံစီသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထက်မြက်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအန္တိမလမ်းညွှန်ကိုသြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံးသောကတ်ကြေးချွတ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အတူတကွထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
နှင့်အတူအများဆုံးသတိမမူအချက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုကောင်းစွာချွန်၊ ထိန်းသိမ်း၊ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ကိုသက်သာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျရှိယုံကြည်ရသောဆံပင်ကတ်ကြေးချွတ်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
CITY BY SHARPENERS
ဆစ်ဒနီ Sharpening န်ဆောင်မှုများ
Brisbane ချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ
Gold Coast Sharpening န်ဆောင်မှုများ
Hobart ချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ
Scissor Sharpening နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အချက်များ!
Scissor Sharpener များသည်ဆံပင်ညှပ်သမားနှင့်ဆံပင်ညှပ်လုပ်ငန်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ဆံပင်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့သည်။
ကတ်ကြေးမပါသောသူများသည်လအနည်းငယ်တိုင်းဆံပင်ကတ်ကြေးကိုချိုး ဖျက်၍ အစားထိုးရန်ကြိုးစားနေကြလိမ့်မည်။
Sharpeners များသည်လေ့ကျင့်ထားသောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးသင်၏ကတ်ကြေးများကိုဆံပင်ညှပ်ခြင်းအခြေအနေသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့အားမူလ "store ၀ ယ်ထားသော" အခြေအနေသို့ပြန်ပို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျရှိကတ်ကြေးများအတွက်အကောင်းဆုံးချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမလေ့လာမီကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ကပ်သောအခါမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေကြပါစို့။
Find out how much it costs to haveaprofessional sharpen your scissors ဤနေရာတွင်!
သင့်ရဲ့ကတ်ကြေးတွေကမှေးနေပြီး ASAP ကိုချွန်ထက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အဓိကလက္ခဏာငါးခုကိုဒီမှာပြထားပါတယ်။
ဆံပင်တစ်လျှောက်စီဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစွာဖြတ်ရန်သင့်ကတ်ကြေး။ ဒါကသင်ကဒီကတ်ကြေးနဲ့ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပြီးပြissuesနာရှိနေတာကိုသတိပြုမိတဲ့အခါမှာအထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာပါ။ သင်ကညှပ်များကိုရှင်းရန်၊ ဓါးသွားအကြားတင်းမာမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်ဆံပင်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်တောက်ရန်ပြhavingနာများရှိနေသေးပါကသင်၏ကတ်ကြေးများကို ASAP ထက်မြက်စေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏လက်နှင့်လက်ချောင်းများသည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းမှပင်ပန်းနေပြီ။ သင့်ရဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတွေမှောင်လာတဲ့အခါအမဲသားတုံးကိုမီးဖိုချောင်သုံးဓါးနဲ့ဖြတ်တောက်သလိုပဲဆံပင်ဖြတ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းပိုပိုပြီးပင်ပန်းလာတယ်။ မှိုင်းသောကတ်ကြေးများသည်သင်၏လက်ချောင်းများ၊ လက်မနှင့်လက်ကောက်ဝတ်များကိုပိုမိုဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏လက်များပင်ပန်းလာသည်ကိုသတိပြုမိပါကသင်၏ကတ်ကြေးများသည်သူတို့၏ပြတ်သားမှုကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုသည်“ ပြိုကွဲခြင်း” သို့မဟုတ်“ အကြပ်အတည်း” စတင်သည်။ သင်သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်အတူဆုံဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်အကြပ်အတည်းတစ်ခုကိုစတင်ခံစားမိပါကသင်ကတ်ကြေးပေါ်တွင်ဝင်ဆန့်ခြင်းသို့မဟုတ်နီကိုတင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤချွန်ထက်မှုကို ASAP လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အမှတ်အသားမပြုပါကအပြောက်များသို့မဟုတ် nick များသည်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဆလိုက်နှင့်အချပ်ဆံပင်ညှပ်လှုပ်ရှားမှုဆံပင်ဖမ်းဆုပ်သည်။ သင်ကဆလိုက်သို့မဟုတ်အချပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်နှင့်ကတ်ကြေးများသည်ဆံပင်ဆွဲလာသောအခါ၎င်းသည်သင်၏ကတ်ကြေးများမှိုင်းလာနေသည်ဟူသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင်၏ကတ်ကြေးဓါးများသည်အချပ်နှင့်လျှောဖြတ်ခြင်းကိုအလွန်တရာလိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အနည်းငယ်မှိုင်းသောကတ်ကြေးများပင်သိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများနှင့်ပြissuesနာများရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်တည့်တည့်မှည့်လာသည်သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပြီဟုသံသယရှိလျှင်၊ သင်ဖွင့်လိုက်သောအခါဓါးသွားများကြားရှိတင်းမာမှုကိုစစ်ဆေးရန်ခဏလောက်ယူပါ။ သင့်လျော်သောတင်းမာမှုကိုချိန်ညှိပြီးဆံပင်ကိုညှပ်ရန်ထပ်မံကြိုးစားပါ။ ပြpersနာများဆက်လက်ရှိနေသေးပါက၎င်းသည်သြစတြေးလျရှိကတ်ကြေးချွန်စက်သို့ပို့ရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကတ်ကြေးဖြတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ချွန်ထက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ ဤနေရာတွင်ဆံပင်: JPScissors ဆောင်းပါးများ.
အကောင်းဆုံးသောကတ်ကြေးကပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသြစတြေးလျားနိုင်ငံ၏မြို့တော်အလိုက်လမ်းညွှန်!
ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမည်ကြီးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာချွန်ထက်မှုပညာရှင်များကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည် Perth, Melbourne, ဆစ်ဒနီ, ဘရစ္စဘိန်း, ဟော့ဘ်တာ၊ နှင့် ရွှေကမ်းခြေ။ ဤထက်မြက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေးသည် လူတစ် ဦး နှင့် / သို့မဟုတ် စာပို့ခြင်း သင့်ရဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးညှပ်များအတွက်ထက်မြက်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ VIC ချွန်မှုန်ဆောင်မှုများ - In-Person, Pickup နှင့် Via Post
Scissor Sharpening န်ဆောင်မှုများ
Pair နှုန်း $ 40-60
Bevel & ခုံး Edge
Sydney, NSW Sharpening Services: In-Person, Pickup နှင့် Via Post
ဘရစ္စဘိန်း၊ QLD ချမှုန်ဆောင်မှုများ - လူပုဂ္ဂိုလ်၊
Gold Coast၊ QLD ချမှုန်ဆောင်မှုများ - In-Person, Pickup နှင့် Via Post
Pair နှုန်း $ 45-55
Adelaide, SA ချည်နှောင်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ - ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပစ်ကပ်နှင့် Via Post
Hobart, TAS ချွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ - In-Person, Pickup နှင့် Via Post
Pair နှုန်း $ 47.50-71.50
ပါ့သ်၊ WA ချွန်တက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ
အနှစ်ချုပ် - hairစတြေးလျမှာဆံပင်အလှပြုပြင်တာအကောင်းဆုံးနည်း။
အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးဆံပင်ညှပ်ဓါးသွားများနှင့် bevel နှင့်အဆေားခံစက်များဖြစ်သည်။
စက်အမျိုးမျိုး၊ လေ့ကျင့်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းအထူးသဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏အရေးကြီးသောကဏ္aspectsများမှာ -
Convex နှင့် Bevel အစွန်းဓါးများကိုထိရောက်စွာချွန်သည်
အရောင်တင်ခြင်း၊ ချောဆီချခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ တင်းမာမှုကိုညှိနိူင်သည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ရိုက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်သည့်အခါဆံပင်ညှပ်ခြင်းတွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွေ့အကြုံ၊
သင်၏မြို့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွင်လူကြိုက်များသောစက်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့လွဲချော်ခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ပေးပါ။
သင်၏ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်စေမည့်ရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ပါ။ ငါဆံပင်စတိုင်လ်နောက်ဆုံးအကြိမ်ငါကတ်ကြေးသွားချွန်တာလောက်သူမလုပ်တဲ့အရာကိုငါ့ရဲ့ stylist နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုကြိတ်ကျောက်ကိုသုံးမလား၊ သူမကိုရယ်ခဲ့တယ်။ သူမဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကဘယ်လောက်စျေးကြီးလဲ၊ သူကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုပျက်စီးစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းမရှိဘူး။ သူမသည်အရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပညာရှင်တစ် ဦး ရှိသည်ဟုဆိုသည်။